Nudgify: Mụba Mgbanwe nke ụlọ ahịa gị na Platform Proof Social nke Integrated | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 29, 2021 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 29, 2021 Douglas Karr
Ụlọ ọrụ m, Highbridge, na -enyere ụlọ ọrụ ejiji aka ịmalite ya onye na-eri ihe atụmatụ n'ime ụlọ. N'ihi na ha bụ ụlọ ọrụ ọdịnala nke na -enye naanị ndị na -ere ahịa, ha chọrọ onye mmekọ ga -enyere aka bụrụ teknụzụ teknụzụ ma nyere ha aka n'akụkụ niile nke mmepe ha, ecommerce, nhazi ịkwụ ụgwọ, ahịa, mgbanwe, na usoro mmezu.
Maka na ha nwere obere SKUs ma ha enweghị akara ama ama, anyị na -akwali ha ka ha malite n'elu ikpo okwu dị njikere, nwee ike itule, ma chọọ obere itinye ego maka nchịkọta ahaziri nke ọma… Shopify.
N'ihi na ha na -amalite azụmahịa a site na ncha, inweta ntụkwasị obi nke ndị ọbịa anyị ga -adị oke mkpa. Tinyere atụmatụ mmekọrịta ọhaneze, akpaaka ahịa (site Klaviyo), ọrụ ndị ahịa siri ike, na mbupu n'efu… Anyị chọrọ a nkwado mmadụ ngwọta na -ejikọ ọnụ n'enweghị nsogbu na Shopify.
Gịnị Bụ Ihe Akaebe Ọha?
Ihe akaebe bụ ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe ndị mmadụ na -e copyomi omume ndị ọzọ na -agbalị ime omume na ọnọdụ enyere. Na nkenke, ọ bụ ndị mmadụ na -eme ihe ha na -ahụ ka ndị ọzọ na -eme. Ọ bụ nchekwa na ọnụọgụ.
Robert Cialdini, Mmetụta, The Psychology of Persuasion
Site na saịtị e -commerce, ahụla m ọrụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze karịrị ndị ọbịa na -edegharị ibe ha. Ihe akaebe na -elekọta mmadụ na -enye ụzọ ndị ọzọ iji chụgharịa ntụgharị:
Trust - Ịhụ na ndị ọbịa ndị ọzọ na -eme nchọgharị na ịzụrụ ihe bụ ihe ngosi siri ike na enwere ike ịtụkwasị akara, ngwaahịa ma ọ bụ saịtị ahụ obi.
Ngwa ngwa - Na saịtị nwere obere ngwa ahịa, a na -akpali ndị ọbịa ịtụgharị ozugbo kama ichere. Egwu nke Ịpụ (FOMO) bụ usoro ntụgharị siri ike.
ewu ewu - Site n'ịkwalite ngwaahịa ndị na -ere nke ukwuu, onye ọbịa na -enweghị uche ga -enwe mmasị ịzụrụ ihe ma ọ bụrụ na ha hụ na ndị ọzọ azụọla ya.
Enyele - Ị nwere ọrịre ma ọ bụ mbelata ego na -arụ ọrụ ugbu a? Ịmepụta Nudges ndị a nwere ike ịkwalite ọnụego ntụgharị gaa na onyinye ndị ama ama ị nwere.
nnweta -Ọ bụrụgodi na onye ọbịa gị adịghị njikere ịzụta, ị nwekwara ike ịmanye ndị ọbịa ka ha banye na onyinye, akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ ọbụna ozi ederede.
Kpochapụ enyerela aka karịa webụsaịtị 1,800 n'ihe karịrị mba 83 mụbaa ọnụego mgbanwe ha-na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị data ozugbo. Akụkụ nke ikpo okwu ha zuru oke gụnyere:
Ihe Omume a -kedu ka esi atụgharị mgbanwe n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ ndebanye aha ọhụrụ wee nwekwuo ntụkwasị obi
Ntanetị data ngwaahịa -Gosi data ngwaahịa ozugbo na ndepụta akpaka
Mepụta Autocapture -Na-egosipụta nbinye aka ọhụrụ na akpaghị aka
Ụkpụrụ Nudge -Nudges ahaziri nke ọma maka e-Commerce, Njem, SaaS na ndị ọzọ
Onye Nudge Nudge - Jiri okwu na onyonyo gị mee Nudges ọhụrụ
Ngosipụta Iwu - Kpebie ibe na ngwaọrụ Nudges gị kwesịrị ịpụta
Ntọala omume - Tọọ ihe mkpalite, igbu oge na oge maka Nudges gị site na ịhazigharị ihe mmịfe ahụ.
Mepụta Ebum n'obi - Tọọ peeji nkwenye gị ka ọ bụrụ ebumnuche iji soro ntụgharị nke enyere aka. Jiri nchịkọta arụnyere n'ime iji bulie ma nweta ahịa ndị ọzọ.
Ụdị Omenala - Gbanwee gburugburu gị ka ịtọ ụda nke ọma
29 Asụsụ - Nudgify na -akwado asụsụ 29 dị iche iche
Dọrọ & dobe iyi - Mepụta iyi ma gosi Nudges gị n'usoro
Nchịkọta Nudge - Nweta nleta, mmekọrịta, na ntụgharị aka enyere aka tụọ nloghachi na itinye ego na -egosi mmekọrịta gị.
Algọridim Nudgify na -aga n'ihu na -amụ nke Nudge na -atụgharị kacha mma na ọkwa ọ bụla nke njem ndị ahịa. Ogologo oge ị na -eji Nudgify, ka ọ ga -abawanye uru.
Malite nnwale ikpebipụ n'efu
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Kpochapụ, Klaviyo, Shopify, na Amazon na iji njikọ ndị ahụ gafee akụkọ a.
Tags: na-atụ egwu na-agaghị efufomodịkwuo akakabarede udumụbaa mgbanwemụbaa ọnụego ntụgharị ecommercemụbaa mgbanwe mgbanwe ahịakpoogba ọtọPsychologymmapụta ahịankwado mmadụkedu ihe akaebe ọha